Nolavina ny fangatahan’ny Tim: nakaton’ny prefet i Mahamasina. | NewsMada
Efa nampoizina. Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny prefektiora, omaly, fa tsy azon’ny Tim hatao ny manao hetsika hankalazana ny faha-15 taony etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny asabotsy izao. Nitohy avy hatrany amin’ny fanakatonana ity kianja ity izany.
Nitondra valin-kafatra avy hatrany ny Tim, manoloana izany. “Tsy nisy hetsika an-dalambe na fanohintohinana ny hetsika natao. Tsy nisy koa ny amboletra ary efa nahazo rariny teny amin’ny tribonaly ny Tim… Midika fa tsy nandika lalàna izahay. Naterin’ny vahoaka teny an-tranony ny filoha Ravalomanana tamin’iny fotoana iny”, hoy ny fanambarana. Ankoatra izany, tsy nahitana olona naratra na fivarotana vaky tamin’iny fotoana iny. Tsy nisy fiara na trano voaroba, nefa noravana tamin’ny baomba mandatsa-dranomaso. Midika io fanambaran’ny prefet manakana ny hetsika io fa fanamparam-pahefana ary tsy mitondra ho any amin’ny fitoniana, araka ny fanambarana ihany…
Tsy mifanalavitra amin’izao fepetra noraisin’ny prefet izao ny nambaran’ny HVM, andro vitsy izao. Efa tsy mivonona ny tsy hanome alalana ny mpitondra… Anjaran’ny mpanao politika rehetra ny mandinika, manomboka eto.